Waxa jira beero badan oo ido ah oo ku kala yaal Australia, New Zealand, America, England, France, Canada iyo dalal kale oo badan. Dabcan, waxay soo saartaa tiro badan oo ah idaha adhiga. Iyagu waa agab ceyriin oo wanaagsan oo loogu talagalay wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah. Sababta Tayada digada adhigu waa tan ugu horeysa ee dhaqashada xoolaha. Xulashada idaha ee idaha waa burooyinkeeda, caws jilicsan, ubaxyo iyo caleemo cagaaran, kuwaas oo ah qaybo urursan nitrogen.
Digada idaha cusub waxay ka kooban tahay 0.46% fosfooraska iyo 0.23% oo kaalshiyam ah, laakiin maadada nitrogen-ka waa 0.66%. Fosfooraska iyo macdanta potassium waxay la mid tahay digada kale ee xoolaha. Waxyaalaha dabiiciga ah waxay ku saabsan yihiin ilaa 30%, oo aad uga fog digada kale ee xoolaha. Maaddada nitrogen-ka ayaa ka badan labanlaab waxa ku jira digada lo'da. Sidaa darteed, markii loo adeegsado tiro isku mid ah digada idaha ee carrada, waxtarka bacriminta ayaa aad uga sarreeya digada kale ee xoolaha. Saameyntiisa bacriminta waa mid deg deg ah waxayna ku habboon tahay labiska sare, laakiin ka dibhalsano jajaban ama granulation, haddii kale way fududahay in la gubo geedo.
Iduhu waa shey, laakiin marar dhif ah ayaa biyo la cabbaa, sidaa darteed digada adhigu way qalalan tahay wayna fiican tahay. Xaddiga saxarada ayaa sidoo kale aad u yar. Digada idaha, sida bacriminta kulul, waa mid ka mid ah digada xoolaha u dhexeeya digada faraska iyo digada lo'da. Digada idaha ayaa ka kooban nafaqooyin hodan ah. Labadaba way fududahay in loo kala baxo nafaqooyin wax ku ool ah oo la nuugo, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin nafaqooyin ay adag tahay in la burburiyo. Sidaa darteed, bacriminta dabiiciga ah ee digada ido waa isku-darka wax-qabadka dhaqso iyo wax-qabad hooseeya, oo ku habboon noocyo kala duwan oo dalab carro ah. Digada adhiga byHalsano-bacriminta bio-bacriminta bakteeriyada halsano bacriminta, iyo burburka cawska kadib, bakteeriyada isku dhafan ee bayoolojiga ayaa si siman u walaaqda, ka dibna aerobic, halsano anaerobic si ay u noqoto bacrimin hufan oo dabiici ah
Waxyaabaha ku jira maaddada dabiiciga ah ee haraaga adhiga waxay ahaayeen 24% - 27%, maadada nitrogen-ka waxay ahayd 0.7% - 0.8%, maadada fosfoorasku waxay ahayd 0.45% - 0.6%, macdanta potassium waxay ahayd 0.3% - 0.6%, nuxurka walxaha dabiiciga ah ee idaha 5%, maadada nitrogen-ka ee 1.3% ilaa 1.4%, fosfooraska aad u yar, potassium aad buu hodan u yahay, ilaa 2.1% ilaa 2.3%.
Nadaafadda Digada Idaha / Geedsan:
1. Isku qas digada adhiga iyo xoogaa budo caws ah. Tirada budada cawsku waxay kuxirantahay qoyaanka digada idaha. Isugeynta guud / halsano waxay ubaahantahay 45% qoyaan.
2. Ku dar 3 kg oo ah bakteeriyo isku dhafan oo ah 1 tan oo ah maaddada digada adhiga ama 1.5 tan oo ah digada idaha cusub. Ka dib markii la qaso bakteeriyada saamiga 1: 300, waxaad si siman ugu buufin kartaa alaabada digada idaha. Ku dar qaddarka ku habboon galleyda, cawska galleyda, cawska qalalan, iwm.
3. Waxaa lagu qalabeyn doonaa mid wanaagsan Mashiinka bacriminta si loo kiciyo walxaha dabiiciga ah. Isku qasiddu waa inay ahaataa mid isku mid ah, oo aan ka bixin dhismaha.
4. Ka dib markaad isku dardarto dhammaan waxyaabaha ceyriinka ah, waxaad sameyn kartaa raso isku-darka bacriminta. Ballaca raso ayaa ah 2.0-3.0 m, dhererkiisu yahay 1.5-2.0 m. Sida dhererka, in ka badan 5 m ayaa ka fiican. Marka heerkulku ka sarreeyo 55 ℃, waad isticmaali kartaamashiinka leexinta windrow compost in loo rogo.
Ogaysiis: waxaa jira qodobo laxiriira adiga samaynta digada adhiga samaynta, sida heerkulka, saamiga C / N, qiimaha pH, oksijiinta iyo ansaxinta, iwm.
5. Isugeyntu waxay noqon doontaa 3 maalmood heerkul kici, 5 maalmood ur, 9 maalmood dabacsan, 12 maalmood udgoon, 15 maalmood burburin.
a. Maalinta seddexaad, heerkulka rakuubbo ee compost ayaa kor u kacaya 60 ℃ - 80 ℃, isaga oo dilaya E. coli, ukumo iyo cudurro kale oo dhir iyo cayayaanka cayayaanka ah.
b. Maalinta shanaad, urta digada adhiga waa la baabi'iyaa.
c. Maalinta sagaalaad, nafaqeynta ayaa noqota mid dabacsan oo qallalan, oo lagu daboolay hyphae cad.
d. Maalinta koowaad ee laba iyo tobnaad, waxay soo saartaa dhadhan khamri ah;
e. Maalinta shan iyo tobnaad, digada idaha ayaa bislaata.
Markaad sameysid nafaqeynta digada ido ee xumaatay, waad iibin kartaa ama ka codsan kartaa jardiinadaada, beertaada, ama jardiinadaada, iwm. Haddii aad rabto inaad sameysid granules ama jajabyada bacriminta dabiiciga ah, digada compost waa inay ku jirtaa waxsoosaarka bacriminta dabiiciga ah.
Digada Lo'da Waxsoosaarka Qurxinta Dhirta Organic
Bacriminta kadib, alaabada ceeriin ee bacriminta dabiiciga ah ayaa loo diraa burburiyey wax semi-qoyan si aad u burburin. Ka dibna ku dar waxyaabo kale oo ah nafaqeynta (nitrogen saafi ah, fosfooraska pentoxide, potassium chloride, ammonium chloride, iwm) si loo buuxiyo heerarka nafaqada ee loo baahan yahay, ka dibna isku qas qalabka. Isticmaalnooc cusub granulator bacriminta dabiiciga ah si loogu kala googooyo walxaha. Qalaji oo qabooji qaybaha. Isticmaalmashiinka shaashadda si loo sameeyo kala-sooc u dhiganta heerka granules-ka aan u-qalmin. Wax soo saarka u qalma si toos ah ayaa loogu soo duubi karaamashiinka wax lagu xiro iyo granules aan u qalmin ayaa loo celin doonaa burburiye dib-u-soocida.
Dhammaan geedi socodka soosaarka bacriminta dabiiciga ah ee digada ayaa loo qaybin karaa isku-darka-jajabinta-isku-darka-qashin-qallajinta- qallajinta- baaritaanka-baakadaha.
Waxaa jira nooc kala duwan oo ah khadka wax soo saarka bacriminta ee dabiiciga ah (laga bilaabo yar illaa baaxad weyn) xulashadaada.
Codsiga Bacriminta Digada Orgiga
1. Digida idaha oo ah wasakhda bacriminta dabiiciga ah waa gaabis, sidaa darteed waxay ku habboon tahay bacriminta aasaasiga ah. Waxay leedahay saamayn wax soo saar koror dalagyada. Way fiicnaan laheyd isku darka bacriminta dabiiciga ah ee kulul. Lagu dabaqay carrada bacaadka ah iyo kuwa dhegta badan, waxay ku guuleysan kartaa horumar xagga taranka, laakiin sidoo kale waxay hagaajineysaa waxqabadka enzyme ciidda.
2. Bacriminta dabiiciga ah waxay ka kooban tahay nafaqooyin kala duwan oo loo baahan yahay si kor loogu qaado tayada wax soo saarka beeraha, si loo ilaaliyo shuruudaha nafaqada.
3. Bacriminta dabiiciga ah waxay waxtar u leedahay dheef-shiid kiimikaadka, hagaajinta dhaqdhaqaaqa bayoolojiga ciidda, qaabdhismeedka iyo nafaqooyinka.
4. Waxay kor u qaadeysaa iska caabinta abaaraha dalagyada, iska caabinta qabowga, macaaneyta iyo caabbinta milixda iyo iska caabinta cudurada.